ကျားပုစွန် ၃ ကောင်
ဂုံး ( သို့ ) ခရု ၅ ကောင်
ပြည်ကြီးငါး ( သို့ ) ကင်းမွန် ၁ ကောင်
ဆာလ်မွန်ငါးအသားလွှာ ၈၀ ဂရမ်
မုန်လာဥနီ ၀.၂၅ လုံး
ပြောင်းဖူးငယ် ၃ ဖူး
မှိုမဲခြောက် ၁ ခု
ရွှေပဲသီး ၅ တောင့်
ရှမ်းငရုပ်နီ ၀.၅ တောင့်
ကြက်သွန်ဖြူ ၅ တတ်
ခရုဆီ ၂ စွန်း
ပဲငံပြာရည်( အချိုရည် ) ၁ လ္ဘက်စွန်း
ပဲငံပြာရည် ( အငံရည် ) ၁ လ္ဘက်စွန်း
ပြောင်းဖူးဆီသန့်၁ စွန်း
ငါးအရသာမှုန့်၁ စွန်း
ပြောင်းဖူးကော်မှုန့်၁ လ္ဘက်စွန်း
ငါးပြုတ်ရည် ၁၀၀ မီလီလီတာ
ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲ ၈၀ ဂရမ်
၁ ။ ပင်လယ်စာ များနှင့် သီးရွက်စုံ တို့ ကိုသန့် စင်လှီးဖြတ်ရျွ် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။
၂ ။ ချင်း အနည်းငယ် ကို အမျှင်ပါးပါးလှီးရျွ် ကြက်သွန်ဖြူ ကို ဓါးပြားရိုက်ထားပြီး မှိုမဲခြောက် ကို နူးအောင်ပြုတ်ထားပါ။
၃ ။ ချင်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ ကို ပြောင်းဖူးဆီသန့် ဖြင့် ဆီသတ်ပြီး ဆန်ခေါက်ဆွဲပြား ကို အနည်းငယ် မွှေးလာအောင် ၂ မိနစ် ခန့်ကြော်ထားပါ။
၄ ။ အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော ပင်လယ်စာ အစုံ ကို ချင်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ပြောင်းဖူးဆီသန့် တို့ ဖြင့် တစ်ဝက် ခန့် ကျက်အောင် ကြော်ထားပါ။
၅ ။ ပင်လယ်စာ အစုံ အနည်းငယ်ကျက်လျှင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော သီးရွက်စုံ ထည့်ချက်ပေးပြီး ငါးပြုတ်ရည် ၊ ခရုဆီ ၊ ပဲငံပြာရည် ( အငံရည် ) ၊ ပဲငံပြာရည် ( အချို ) ၊ ငါးအရသာမှုန့် တို့ ထည့်ချက်ရျွ် အရသာ ကို ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် တို့ ဖြင့် ထိမ်းညှိထားပါ။
၆ ။ ဟင်းရည် ပွက်ပွက်ဆူလျှင် ပြောင်းဖူးကော်မှုန့် က်ို ရေတွင်ဖျော်ပြီး ဟင်းရည်အနည်းငယ်ပျစ်အောင်ထည်ချက်ပေးရျွ် မီးပိတ်ပြီးမှ အသင့်ခေါက်ထားသော ကြက်ဥ ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ကာ နှမ်းဆီမွှေး အနည်းငယ်အုပ်ရျွ် ပြင်ဆင်ထားပါ။
၇ ။ အသင့်ကြော်ထားသော ဆန်ခေါက်ဆွဲပြား ကို ပန်းကန်ပြားတွင် ဦးစွာထည့်ပြီးမှ အသင့်ချက်ထားသော ပင်လယ်စာ နှင့် သီးရွက်စုံ ဟင်းရည် ကို အပေါ်မှ ဖြည်းညှင်းစွာလောင်းထည့်ရျွ် ကြက်သွန်မိတ် ၊ ရှမ်းငရုပ်နီ တို့ ဖြင့် အလှဆင် တည်ခင်းပါ။
Tiger Prawns3numbers
Mussel ( or ) Clams5numbers
Squid ( or ) Cattle Fish 1 number
Salmon Fillet 80 g
Carrot ¼ number
Young Corn3numbers
Chinese Black Mushroom 1 number
Snow Pea5numbers
Caulifloweralittle
Red Chili ½ number
Clean and cut all Seafood and Vegetables then put aside.
Julianne some Ginger and Press some peeled Garlic and cook the Chinese black mushroom in advanced.
Saute the Ginger Julianne and Press Garlic with some Corn Oil until get aroma then add in Hor Fan Noodle and cook for2minutes then put aside.
Saute the Seafood with some Ginger Julianne and Press Garlic in Corn Oil until half done.
When Seafood half cooked add in all Vegetables and sautéawhile then pour in Fish Stock , Oyster Sauce, Light Soya Sauce, Dark Soya Sauce, Dashi Powder, Cooked Chinese Black Mushroom and adjust the taste with some Salt & Crushed Black Pepper.
When Gravy get boil add some corn flour in water until thick as you desire then turn off the heat and pour in Egg Wash slowly then finishing with some Sesame Oil.
Place the Flat Rice Noodle first on the plate and pour the Gravy with Seafood and Vegetables on top then garnishing with some Spring Onion and Red Chili as you desire and serve.